Bannaanka Jumlada UPF 50 + Kalluumeysiga Qorraxda Kalluumeysiga iyo Soo saaraha Neck | Kormeer
Bannaanka UPF 50 + Kalluumeysiga Qorraxda Kalluumeysiga oo la sudhay Qoorta
U diyaar garow Adventure: Ma waxaad raadineysaa wax fiican outdoor sun cap si aad u buuxiso dharkaaga xiisaha leh ee kalluumeysigaaga xiga, ugaarsiga, ama safarka xerada. Hagaag, waad heshay. Tanioutdoor sun cap waa wax ku ool, neefsasho, miisaan fudud, oo raaxo leh - marka la soo koobo, wax kasta oo koofiyaduhu noqdaan.
Hawlaha Bannaanka: Haddii aad qorsheyneyso inaad kalluumeysi ka sameysato haro, ugaarsi ugaarsi, ama aad si fudud u rabto inaad dib u laado oo aad ku raaxeysato bannaanka oo aad haysato dabool qabow, koofiyaddan aadka u fiican waxay hubin doontaa inay qorraxda indhahaaga ka ilaaliso lagana hortago wixii qoraxdu gubto.
Tayada Sare: Marka ay timaaddo annaga daboolka qorraxda ee kalluumeysiga, waxaan ka dhignaa hal dhibic oo aan isticmaalno wax aan ahayn qalabka ugu fiican, iyo sidoo kale hababka wax soo saarka casriga ah iyo xakamaynta tayada adag.
Xulka Badbaadinta Dhegta iyo Luqunta: oo ay weheliso caaraddiisa ballaaran, koofiyaddan kalluumeysiga banaanka sidoo kale waxaa lagu qalabeeyaa fallaadh cadceedda laga ilaaliyo oo dabooli kara dhabarka qoortaada iyo dhegahaaga, kana hortagi kara xanaaqa iyo gubashada qorraxda inay ku sii sugnaadaan qorraxda tooska ah muddo dheer.
1. U Diyaar Garowga Tacaburka: Ma waxaad raadineysaa daboolka qorraxda ee qumman si aad kor ugu qaadatid dharkaaga xiisaha leh ee kalluumeysiga soo socda, ugaarsiga, ama safarka xerada. Hagaag, waad heshay. Daboolka qorraxda ee banaanka ah waa mid ficil ah, neefsan kara, miisaan fudud, oo raaxo leh - marka la soo koobo, wax walba oo koofiyaduhu noqdaan
2. Hawlaha Bannaanka: Haddii aad qorshaynaysid inaad kalluumeysi ka sameysatid haro, ugaarsi ugaarsi, ama aad si fudud u rabto inaad dib u laado oo aad ku raaxeysato bannaanka oo aad haysato dabool qabow, koofiyaddan aadka u wanaagsan ayaa hubin doonta inay qorraxda iska ilaaliso indhahaaga oo ka hortag wax gubasho qorrax ah.
3. Tayada Caadiga ah: Markay tahay dabadeena qorraxda kaluumeysiga banaanka, waxaan sameyneynaa qodob ah inaanan isticmaalin wax aan ka aheyn waxyaabaha ugu fiican, iyo sidoo kale hababka wax soo saarka casriga ah iyo tayada adag ee tayada.
4. Maskaxda Badbaadinta Dhagaha iyo Qoorta: Oo ay weheliso cirifka ballaadhan, koofiyaddan qorraxda ee kalluumeysiga banaanka waxaa sidoo kale lagu qalabeeyay fallaadh cadceedda laga ilaaliyo oo dabooli karta dhabarka qoortaada iyo dhegahaaga, waxayna ka hortagi kartaa xanaaqa iyo gubashada qorraxda inay si toos ah ugu sii socdaan iftiinka qoraxda muddo aad u dheer.
Shayga Mawduuca Ikhtiyaar
Waxyaabaha Pongee Waxyaabo kale oo waafaqsan macaamiisha looga baahan yahay
Cabir 58cm Kuwa kale waa la habeyn karaa
Midab Cawl khafiif ah Ama loo habeeyay
Astaanta Daabacaadda, Patchwork, Fidinta daabacaadda, 3D daabac, Calaamado isdabajoog ah oo sarreeya ayaa Laheli karaa Fadlan keen sawirradaada ama tusaalaha asalka ah
Shaqaynta UPF50 +, nuugista qoyaanka, biyuhu, ka saarida dhididka iyo qalajinta degdegga ah,
Codsiga Buurta fuula, kaluumeysiga, socodka dheer, safarka, wadada ka baxsan, iwm
Muddada Qiimaha FOB Qingdao, Shiinaha Bixinta qiimaha aasaasiga ah waxay kuxirantahay tayada ugu dambeysa ee tayada iyo naqshadeynta
Waqtiga dirida 1. Muunado Waqtiga hogaaminta: 7-15 maalmaha shaqada
2. Waqtiga Lead Production: 45-60 maalmood ka dib markii amarka la xaqiijiyay oo muunad la ansixiyay
Shuruudaha Bixinta T / T T / T (30% deebaaji ah ka hor amarka la xaqiijiyay, bixinta dheelitirka ka hor rarka)
Tacliiq 1. Maaddada, midabada, qaabka iyo qeexitaanka Bannaanka Kalluumeysiga Qorraxda waxaa loo samayn karaa si waafaqsan shuruudahaaga.
2. Koofiyadaha taxanaha: Koofiyad baaldi moodada, Bannaanka Kalluumeysiga Qorraxda, Koofiyad Xayeysiin, Koofiyad baseball, Koofiyad Milatari, Mesh Cap, Kid's Cap, Jiilaal qaboobaha, Koofiyadda Buugga Camouflage, Koofiyad la dhaqay, Koofiyad kalluumeysi iwm.
3. Waxaan kaaga jawaabeynaa isla marka aan helno su'aalaha.
4. Waxaa laguu dammaanad qaadayaa tayada la isku halleyn karo iyo adeegga iibka kadib, waxaad ku farxi doontaa inaad ogaato in toos nooga soo dejinta ay tahay mid aad u fudud oo fudud sida aad uga iibsato alaab-qeybiyeyaasha maxalliga ah laakiin leh qiime aad u macquul ah iyo xulashooyin badan.
★ Ku soo dhawow amarkaaga OEM daboolka qorraxda kalluumeysiga iyo noocyada kale.
Hoos waa koofiyadeena kale ee qorraxda kalluumeysiga, fadlan noo sheeg koofiyadahaaga habboon ama soo dir nashqaddaada, mahadsanid.
1. Ku soo dhow Port Qingdao, waxay u baahan tahay hal saac oo qallajin ah, oo leh gaadiid dekedda ka sarreeya oo loogu talagalay daboolka qorraxda kalluunka dibedda.
2.Waxaan haynaa naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah iyo shaqaale farsamo, iyo habka maaraynta aqoon isweydaarsiga casriga ah, oo ku qalabaysan qalab xarriiq wax soo saar casri ah, oo leh xoog farsamo oo xoog leh;
3.Wershaddu waxay daboolaysaa aag 13000 mitir murabac ah, oo ay la socdaan ku dhowaad 300 oo shaqaale ah, Sidaa darteed, soosaarka iyo bixinta waqtiga qorraxda kalluumeysiga dibadda waa la damaanad qaaday;
4.Has wuxuu ka gudbay shahaadada nidaamka tayada ISO9001, shahaadada WRAP ee Mareykanka iyo shahaadada qiimeynta karti ee hay'ada BV ee caalamiga ah.
Hore: Astaanta Calaamadda Calaamadda Calaamadaha Baaldiga ee Kalluumeysiga
Xiga: Koofiyadaha Isboortiga ee Qorraxda Booqashada loogu talagalay ragga iyo dumarka
Bannaanka Ciyaaraha Dibadda
Koofiyadaha Ciyaaraha Ciyaaraha
Isboortiga Jiilaalka Ciyaaraha
UPF 50 + Foldin Dibedda ah ...
Bannaanka Hiki-Dabeysha ...
Koofiyad Balaadhan Oo Koofiyad ...